Ngbaghara iwu | Onyinye wardgwọ Ọrụ - Lovehụnanya, Mmekọahụ na Intanet
Home Resources Nbudata Iwu
Peeji a bu ihe ngbaghara iwu nke Regwọ Ọrụ .gwọ. Weebụsaịtị a nwere ozi gbasara ozi gbasara iwu. Ihe omuma a abughi ndụmọdụ, ma ekwesighi ka esi emeso ya.
A na-enye ozi iwu na weebụsaịtị a "dị ka ọ dị" na-enweghị ihe nnochite ma ọ bụ ikike ọ bụla, gosipụtara ma ọ bụ gosipụta. Onyinye wardgwọ makesgwọ ahụ enweghị nnọchite ma ọ bụ ikike na njikọ gbasara ozi iwu na weebụsaịtị a.
• ihe ọmụma gbasara iwu na weebụsaịtị a ga-adị mgbe niile, ma ọ bụ dị ma ọlị; ma ọ bụ
• ihe ọmụma banyere iwu dị na weebụsaịtị a zuru ezu, eziokwu, ziri ezi, dị ugbu a, ma ọ bụ na-abụghị nduhie.
Ojiji nke Ọrụ na weebụsaịtị
Ikwuputara ma kwenye na:
Ojiji nke Ọrụ na weebụsaịtị (s) dị naanị n'ihe ize ndụ gị. Foundationgwọ Ọrụ hasgwọ ahụ emeela mgbalị niile iji hụ na ọdịnaya dị na weebụsaịtị (s) ma wepụta ya site na Ọrụ ndị ahụ ziri ezi ma bụrụ nke dị ugbu a ma zie ezie n'oge mbipụta. Agbanyeghị, a na-enye Weebụsaịtị na Ọrụ dị iche iche 'dị ka ọ dị' na 'dị ka ọ dị'. Anyị anaghị ekwe gị nkwa nzi ezi, oge, izu ezu ma ọ bụ ahụike maka ebumnuche nke ọdịnaya enyere na weebụsaịtị (s) ma ọ bụ site na Ọrụ ma ọ bụ na ojiji nke weebụsaịtị (s) ga-egbochi, enweghị nje ma ọ bụ enweghị njehie. Enweghị ọrụ nnabata ma ọ bụ na nnọchite nke wardgwọ Ọrụ forgwọ maka njehie ọ bụla, enweghị ma ọ bụ ozi ezighi ezi na weebụsaịtị (s) ma ọ bụ dị site na Ọrụ.
Ihe ọ bụla ebudatara ma ọ bụ nweta nke ọzọ site na iji Ọrụ ahụ eme na uche gị na ihe egwu gị na ị ga-abụ naanị maka mmebi ọ bụla na sistemụ kọmputa gị ma ọ bụ ọnwụ data nke sitere na nbudata nke ihe ọ bụla.
Enweghị ndụmọdụ ma ọ bụ ozi, ma ọ bụ ọnụ ma ọ bụ ederede, nke ị nwetara site na wardgwọ Ọrụ shallgwọ ga-emepụta akwụkwọ ikike ọ bụla ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ ekwupụtaghị na Usoro na Ọnọdụ ndị a.
Regwọ Ọrụ'sgwọ Ọrụ zuru oke maka gị na nkwekọrịta, kwupụtara, (gụnyere ileghara anya) gbasara Usoro na Ọnọdụ ndị a, iji weebụsaịtị (s) na / ma ọ bụ Ọrụ ọ bụla ga-ejedebe na nke (a) £ 150.00 na ( b) ego ugwo nke ikwuru na Regwọ Ọrụ undergwọ n'okpuru nkwekọrịta ọ bụla maka ọrụ akwụ ụgwọ n'ime ọnwa atọ tupu ihe omume na-eweta nkwupụta ahụ.
Express kwuputara ma kwenye na wardgwọ Ọrụ shallgwọ ahụ agaghị akwụ ụgwọ maka mmebi ọ bụla ọ bụla, na-enweghị atụ, nke pụrụ iche, nke na-esite na ya ma ọ bụ ihe atụ, ma ọ bụ maka enweghị uru, uru, azụmahịa, ego echekwara, ihu ọma ma ọ bụ ohere.
Onweghị ihe dị na Usoro na Ọnọdụ ndị a ga-emetụta ikike iwu nke onye ahịa ọ bụla ma ọ bụ wepu ma ọ bụ gbochie ụgwọ ọ bụla maka aghụghọ ma ọ bụ ọnwụ ma ọ bụ mmerụ ahụ nke sitere na nleghara anya nke Regwọ Ọrụ .gwọ.
Ọdịnaya dị na weebụsaịtị (s) ma wepụta ya site na Ọrụ bụ naanị maka ozi zuru oke ma ọ bụghị maka ya, ọ bụghị ya, bụrụ iwu ma ọ bụ ọrụ ọkachamara ọzọ ma ọ bụ nkwanye ịzụta ngwaahịa ọ bụla ma ọ bụ ọrụ nke ekwesịrị ime mkpebi doro anya. Ihe ọmụma, ọdịnaya nke weebụsaịtị (s) na Ọrụ ahụ anaghị edozi ọnọdụ gị karịsịa ma yabụ na ị gaghị adabere na ọdịnaya nke weebụsaịtị (Ọrụ) na Ọrụ dị ka onye nnọchi maka ndụmọdụ ọkachamara kwesịrị ekwesị.
Onyinye Regwọ Ọrụ abụghị ọrụ maka otu esi eji ọdịnaya dị na weebụsaịtị (s) ma ọ bụ dị site na Ọrụ ahụ, tụgharịa ma ọ bụ ntụkwasị obi dị na ya. Anyị anaghị anabata ọrụ ọ bụla maka nsonaazụ nke ihe ọ bụla emere na ndabere nke ozi enyere na weebụsaịtị (s) ma ọ bụ dị site na Ọrụ.
Gaghị atụkwasị obi na ozi dị na weebụsaịtị a ka ọ bụrụ ndụmọdụ ọzọ gbasara ndụmọdụ sitere n'aka onye ọka iwu gị, onye na-akwado anyị, onye ọka iwu, ọka iwu ma ọ bụ ndị ọrụ ọrụ iwu ọkachamara ọzọ.
Y’oburu n’inwe ajuju doro anya banyere okwu iwu obula, iguru onye oka iwu gi, onye oka iwu, onye oka iwu, onye oka iwu ma obu ndi okacha amara ndi ozo
Ikwesighi igbu oge ịchọ ndụmọdụ gbasara iwu, leghara ndụmọdụ gbasara iwu anya, ma ọ bụ bido ma ọ bụ kwụsị usoro iwu ọ bụla n'ihi ozi dị na weebụsaịtị a.
Onweghị ihe dị na nkwupụta iwu a ga-amachi ụgwọ anyị ọ bụla n'ụzọ ọ bụla na-anaghị anabata n'okpuru iwu dị, ma ọ bụ wepu iwu ọ bụla nke iwu anyị agaghị ewepu n'okpuru iwu dị.
Ihe omume ndị na-abụghị njikwa anyị.
Nkebi okwu a na-akọwa na ọ bụghị anyị kpatara ihe ndị na-enweghị njikwa anyị.
Onyinye Thegwọ willgwọ ahụ agaghị akwụ ụgwọ ma ọ bụ kpatara maka ọdịda ọ bụla ịrụ, ma ọ bụ igbu oge na ịrụ ọrụ nke ọ bụla n'ime ọrụ anyị n'okpuru Usoro na Ọnọdụ ndị a ma ọ bụ nkwekọrịta ọ bụla metụtara n'etiti anyị nke kpatara site na ihe ndị na-abụghị njikwa anyị nwere ezi uche ("Force Majeure" ).
Omume nwere ihe omume ga - agụnye ihe ọ bụla, ihe omume, ihe na - adịghị eme, iwepụ ma ọ bụ ihe ọghọm karịrị njikwa anyị nwere ezi uche ma gụnyere otu (enweghị mmachi) ndị a:
Mgbapu, mkpọchi na mmemme ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Ọgba aghara obodo, ọgba aghara, mwakpo, mwakpo ndị na-eyi ọha egwu ma ọ bụ egwu nke mwakpo nke ndị na-eyi ọha egwu, agha (ma ekwuwapụtara ma ọ bụ na ekwughị) ma ọ bụ iyi egwu ma ọ bụ ịkwadebe maka agha.
Fire, mgbawa, oké ifufe, idei mmiri, ala ọma jijiji, subsidence, ntiwapụ nke ọrịa ma ọ bụ ọdachi ndị ọzọ na-emere onwe.
Enweghi ike iji ụgbọ okporo ígwè, mbupu, ụgbọ elu, ụgbọ njem ma ọ bụ ụzọ ndị ọzọ nke njem ọha na eze ma ọ bụ nke onwe.
Enweghị ike iji netwọk mmekọrịta ọha na eze ma ọ bụ nkeonwe.